Xeryaha fardaha | Fardaha Noti
Baloogyada Waa meesha ay xoolaheenu ku nastaan, marka waa inaan si fiican ugu habboonaan iyaga, maxaa yeelay markaa dhibaatooyinku si fudud bay ku yimaadaan, dhibaatooyinna maqaarka ama xitaa meelaha kale. Waa inaan tixgelino faahfaahinta badan markaan iskudareyno iyo dayactirka xeryaha, gaar ahaan heerka nadaafadda.
Goobtan waxaad ka heli doontaa, talooyin, alaabooyin iyo fikrado si fardahayagu u leeyihiin dhowr dhismo oo qaabkaaga ah iyo baahiyahaaga. Xusuusnow in macluumaadku yahay awood waxa intaa ka badanna aan u ururin karno si ka wanaagsan, innaga iyo xoolahayaga. Ha iloobin in iyaga xasilloonida ay la mid tahay qolkeenna oo kale iyo in sida ugu wanaagsan ee loola qabsado xayawaanka, badan ayaa ka soo bixi doonta marka loo eego waajibaadkeeda, ha ahaado isboorti iyo haddii kale.
Wiil xasilloon waa kan ka masuulka ah daryeelka iyo daryeelka sinnaanta. Shaqadaadu waa inaad xakameyso ...
Faraska waxaa suura gal ah inuu kamid yahay xubnaha boqortooyada xayawaanka ee gudbiya quruxda iyo quruxda badan. Qaabkiisa sharafta leh ...
Dayactirka faraska iyo sidoo kale nadaafadiisa ayaa muhiim u ah sida qolka uu ku jiro, taas oo ah in la yiraahdo ...
by Rosa Sanches samee 8 sano .
Joogsiintu waxay ka dhigan tahay in faraska loo xiro kiiskan: xasilloonida, xasilloonida ama sanduuqa, waana meel bannaan ...
Muhiimadda caado u leedahay fardaha
by danigraffi samee 10 sano .
Caadaysiga nolosha farduhu waa muhiimad muhiim ah, iyadoo la tixgelinayo in isbeddel kasta oo kadis ahi ...
Falcelinta dabiiciga ah ee fardaha
Farduhu waxay leeyihiin falcelinno aad u kala duwan marka loo eego shakhsiyadda mid walba, laakiin waxa aan dammaanad ka qaadi karno waa ...
Markuu farasku ku jiro xeryaha muddo dheer wuxuu bilaabaa inuu yeesho qaabab dhaqan xumo, tusaale ahaan waxay bilaabaan ...
Dhammaanteen kuwa maalmaheenna ku dhammaystira kuwo isku mid ah waxaynu daawan karnaa dhaqdhaqaaqa dhegaha, oo aan waxba ...
Xeryayaashu waa lama huraan dhammaanteenna ku nool dunida casriga ah, markaa waxay noqon doontaa been in la yiraahdo ...
by danigraffi samee 11 sano .
Marar badan waxaan aragnaa in farduhu had iyo goor turunturoodaan, xerooyinka fuushan iyo marka ay wataan kan fuushan,
Daabacaaddu waxay ku saleysan tahay helitaanka fardaheena si ay u yeeshaan hufnaan horumar leh oo ku saabsan dhiirrigelinta kala duwan ee ...